Okuhle Self Ukulinganisela Scooter Nge APP - Jomo Technology Co., Ltd
Kukhona hoverboards eziningi ezingekho emthethweni laphaya kuyatholakala emakethe, futhi uncamela ukuze uqinisekise ukuthi uyoba munye lapho ivikeleke ukugibela wena noma izingane zakho. Lezi hoverboards ayatholakala kusukela amafemu ohluke ngokuphelele ngobukhulu ezahlukene futhi ifomu ukuze bahlangabezane nemfuneko umuntu. Izikhulumi ngaphakathi Segway hoverboard kuthiwa limbozwe carbon fible embozwe Ingaphandle. Thola edingekayo hoverboard yakho Scooters self-kulinganisa kagesi qathatha yakho ngokuyala kusukela esizikhethayo ezinkulu, Koowheel E1 mkhulu kunezinhliziyo bendabuko isikuta kagesi.
Okokuqala, kwaba Patent Innovative imfashini design cool Koowheel.
Okwesibili, it has Mahhala APP ukuqopha bese wabelana wonke uhambo lwakho, ukushintsha izilungiselelo.
Okwesithathu, ukubonisa LED isikrini ngokuphelele ukukhombisa ibhethri nesivinini. Zonke lezi zici zinhle izingane kanye nabantu abadala. Lo mkhiqizo cishe hoverboards enkulu zonke engake atholakala futhi iza izici ezimangalisayo eyenza kube efanelekayo umgomo walo. Ngemva kwalokho, senze bacubungula hoverboards ukunikela izinqumo ephumelela kunazo.
Iningi Mini Segway hoverboards ube ngesivinini ahlukahlukene kanye nesisindo. Ekhuluma ijubane futhi ziyahlukahluka we hoverboard, lena presents isivinini max ka 22km / h. Kungase mhlawumbe ukulayisha 80-100kg isisindo kuso. Zokuthutha Private manje iba extra kujabulise futhi enza izinto ezihlukahlukene lapho umuntu eba self sekulinganisa Scooters/ hoverboards . Yazi-nendlela Ungumngane oyinhloko isintu lokho ekuthuthukiseni yokuphila akunika izinketho eziningi ukuthola brand isici esisha emhlabeni nge isinyathelo ngasinye.
Kuleli Self Ukulinganisela Izikuta Uhlolojikelele Iwebhusayithi, sike safike kubuyekezwe lezi nabathengisi okungaba esinokwethenjelwa nokuhlakanipha ukunikela amabhodi asezingeni elifanele. Nezimfashini evikelwe okwamanje ziyeza futhi ayatholakala emakethe. Shift ngakwesobunxele noma efanele ukuze ujike, noma shift emuva ahoxise. Izikuta kwase kuthengiswe ngoba ikakhulukazi umuntu izakhiwo ukusetshenziswa izingane. Nokho, kusukela umcabango wami siqu, okunye okukhethwa kukho kokushaya Kungasiza ekusweleni kothile kodwa hhayi bonke. Noma yimuphi leliphasi kunaleyo, futhi lomthengi qaphela - ungase futhi sithambekele ukuthenga lemon. Isibuyekezo ELISHA: BEWARE ukuthenga ngemali ephansi wenza Koowheel knockoffs! Nakuba Scooters uzame ukuqinisekisa ukuphepha kwakho ngokunikeza kwakho nge uhlelo twin okulinganisa, ungase ufune ukuqinisekisa ukuphepha kwakho nakakhulu. Uma unomuzwa wokuthi ibhizinisi wakho engenakho ukuthi umuzwa yesimanje, ungase ushintshe kalula ukuthi ngokuthenga ambalwa self sekulinganisa Scooters. Ungase balukhulume ngisho emakhoneni ngesivinini ngokweqile ngempela kwenzeka kuwe latawufundziswa nje isici ohlangothini.